Off-Line On-the-Fly Myanmar Font Converter: Myanmar Unicode နဲ့ ပကျသကျပွီး နားလညျမိသမြှ
Posted by Ngwe Tun (Solveware Solution) at 12:15 AM
ကြိုက်တေ။ အားမလျှော့နဲ့ဗျို့။ မြန်မာစာယူနီကုတ်စနစ် တိုးတက်လာမှုဟာ မြန်မာစာတိုးတက်လာမှုပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား? မြန်မာစာတိုးတက်လာမှုဟာလည်း အစ်ကိုတွေညီတွေဖြစ်တဲ့ မွန်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုဝ်းစာတွေ တိုးတက်လာမှုပဲပေါ့။
မင်းပါးစပ်ကတော့ စေတနာအရင်းခံ အရင်းခံ နဲ့
ဒါပေမယ့် zawgyi ကိုအသက်လွက်လိုက်ဖဲ့နေတဲ့
Zawgyi လည်း unicode မစစ်သလို၊မင်းပြောတဲ့
Myanmar3 ကလဲဖွတ်ပဲ..မင်းတို့Myanmar3 ကောင်း
တယ်၊unicode စစ်တာသေချာရင် ဟေ့ကောင်
မသုံးပဲ ဘယ်ရှိမလဲကွ။မြန်မာပြည်မှာ လေးထောင့်တုံးနဲ့
ကင်းတဲ့ unicode ဆိုတာမရှိသေးဘူး။myanmar3
unicode စစ်တယ်တဲ့ ကျွန်ပျူတာမကိုင်ဘူးတဲ့လူတွေကိုသွားပြောကွာ...
please, let me copy your post
ဇော်ဂျီက လူတွေက စီးပွားဖြစ်ထုတ်ဖို့ စဉ်းစားပြီးတော့ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ်ကော တစ်ခြားဖောင့်တွေကော ပေါ့လေစီးပွားရေးဆန်ချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၀င်းမြန်မာဆိုရင် စကားပလ္လင်ကိုခံထားတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ရရစ်ဆိုတာကလဲ ကျနော်တို့မြန်မာစာ စာစီစာရိုက်စသင်တုန်းက ၀င်းအင်းဝတို့ဘာညာသသာရမှာ ရရစ်ကိုအရင်ရိုက်ကတာချည်းပါပဲ။ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်ဆုံး တကယ်မညှာတမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် သုံးစွဲသူတွေက ဘာနဲ့အဆင်ပိုပြေကြလဲလို့သားတစ်ခွန်းတည်းမေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေတာနဲ့စံညွှန်းညှိမယ်ဆိုရင် မြန်မာစာ ချက်ချင်းတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ တစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲ့ မြန်မာစာကိုလက်ဝါးအုပ်ရဖို့ အတင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ယူနီကုဒ်တင်မဟုတ်ဘူး ဇော်ဂျီစတဲ့တစ်ခြားဖောင့်တွေကို ဘာသုံးရကောင်းမှန်းမသိပဲနဲ့ အမျိုးအစားပိုများလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Zaw Nyein Aye said...
I agree with the benefits of Unicode and wanted to use Myanmar font so very much in search engines and so forth long time ago. However, I don't like the fact that the author attack the Zawgyi developers, I don't know much money or profit did Zawgyi developers make, (although I've never paid to use Zawgyi) but they just invented at the right time when people needaclear font very much by the time IT is developing inagreat speed. At that time, Myanmar Unicode was at the embryo stage and now attacking the developer that helped many people to able to communicate for many years.
Even now, the clarity and beauty of most of the Myanmar unicode fonts cannot beat Zawgyi font.